အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက်သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက်သူ
Posted by winkyawaung on Oct 3, 2010 in Myanma News, Short Story |7comments
BA KENBO SB ဂဠဳန္ဆားခ်က္သူ
ဗုံးဖောက်ခွဲရန် ပြစ်မှတ် ကောင်းမွန်စူပါမားကတ်
မကွေးမြို့ ကောင်းမွန်စူပါမားကတ်ကြီး အား ဗုံးဖောက်ခွဲရန်
ခြိမ်းခြောက်ပြီးငွေတောင်း တဲ့ လူမိုက်
၂၀-၅-၂၀၁ဝ နေ့၊ နေ့လည်(၁၁)နာရီ ထမင်းစားချိ်န်တွင်
ကောင်းမွန်စူပါမားကတ်၏ ဒုတိယထပ်မှ ရှမ်းစတား စားသောက်ဆိုင်သို့
လူငယ်တစ်ယောက်တက်လာ၏။ လူငယ်သည် အသက်(၂၇)နှစ်ခန့် ၊ အရပ်အနည်းငယ်ရှည်သည်။
ဆံပင်တွေက ခပ်ပွပွ။ မျက်လုံးက ရီဝေပြီး မှုန်တေတေ ဖြစ်နေ
သည်။ကြက်ဆီထမင်းကို စားရန်မှာပြီးစား၏။ ဤကဲ့သို့ ခန်းနားထည်ဝါ
သော(၃)ထပ်ရှိတဲ့ ကောင်းမွန်စူပါ မားကတ်ကြီးကို မျက်လုံးကစား၍
လှည့်ပတ်ကြည့်နေ သည်။ သူထမင်းစားပြီး အောက်ထပ်သို့ ဆင်းလာခဲ့သည်။
ကောင်းမွန်စူပါမားကတ်၏ အောက်ထပ် မြေညီထပ်မှ ကောင်းမွန် မှုန့်ထုပ်တစ်ထုပ်
လူငယ်သည် သူ၏ ညီမဖြစ်သော မရွှေဇင်ဌေးတို့အိမ် အမှတ်(၂၆၈)၊ (၉)လမ်း၊
ရန်မျိုးနိုင်ရပ် ကွက်သို့ ရောက်လာခဲ့၏။ အချိန်မှာ နေ့လည်(၁)နာရီ။
နေအပူရှိန်ကလည်း တော်တော်ပြင်း ထန်နေ သည်။ အိမ်၏
အောက်ထပ်သို့ဝင်လိုက်ရာ.. မည်သူ့ကိုမှ မတွေရပါ။ လူငယ်သည် တိတ်ဆိပ်နေသော
အိမ်အောက်ထပ်တွင် သူ၏ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်း ဖြစ်နေသော
ဆံပင်ရောင်းဝယ်ရေးမှ တင်ထားသော ကြွေးငွေသိန်း(၃၀)ကိစ္စများကို
ငွေ(၂၅) သိန်းကိစ္စ၊သူ၏မိန်းမက ဆံပင်ဖိုးကြွေးတောင်းခိုင်းထားတဲ့
ရန်ပါယ်ရပ် ကွက်မှ“ရှင်ဖူး” ဆံပင် အရောင်းဆိုင်ထံမှငွေ(၂)သိန်းကိုလည်း
သူကတောင်း၍ သုံးပစ်ပြီးဖြစ် ကြောင်းတို့အား တသီ
တသန်းကြီးစဉ်းစားခန်းဝင်ပြီး သက်ပြင်းတွေမှုတ်ထုတ်နေ ပါသည်။စီးပွားရေး
အကြပ် အတည်း များအား စဉ်းစားရင်း တစ်ရေးအိပ်လိုက်ပေတော့၏။
တစ်ရေးနိုးသော် အကြံပေါ် ဆိုသည့်အတိုင်း လူငယ်သည်
ကောင်းမွန်စူပါမားကတ် ပေါ်မှ ကြက်ဆီထမင်းစားရင်း စဉ်းစားခဲ့သော စိတ်ကူးကို
ရင်ထဲမှာ အသံထွက်၍ အကွက်ချပါတော့ ၏။..“ငါ
ဒီကြွးတွေကိုပြန်ဆပ်နိုင်အောင်..ယခုခေတ်ကာလအတွင်း သတင်းခေတ်စားနေတဲ့ ဗုံး
ဗုံးဖောက်ခွဲမည်လို့ ငါ့မှာ ပါလာခဲ့တဲ့ တစ်ခါသုံးကတ် ဖုန်းကို
အသုံးချပြီး ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းမယ်..။” ဟု စီစဉ်၍ ယင်းအိမ်မှ
ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လူငယ်ဘဝမှ ယခုချက်ချင်းပင်
အများပြည်သူများအား ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့စေသော လူဆိုး၊လူမိုက်ဂိုဏ်း
၂၀-၅-၂၀၁ဝ ရက်၊ ည(၇)နာရီအချိန်တွင် လူမိုက်သည် မကွေးမြို့
ကန်သာရပ်ကွက်၊ အ.ထ.က (၁)လမ်းရှိ့ ကန်သာရေကန်ကြီး၏ ကန်ဘောင်ပေါ်သို့
ရောက်လာခဲ့၏။သူဝယ်ယူ လာခဲ့သော ကောင်းမွန် မှုန့်ထုတ်မှ
ကောင်းမွန်စူပါမားကတ်ဆိုင် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ကြည့်၍ လူမိုက်
“ ဟလို.ကောင်းမွန်စူပါမားကတ်ဖုန်း ၂၃၆၀ဝ နံပါတ်လားဗျာ..”
အခြားတဘက်မှ တယ်လီဖုန်းမှာ လိုင်းမအားကြောင်း တတီ တီ မည်နေပါသည်။
“ ဟလို..ကောင်းမွန် ၂၃၆၀၁ ကလား.? ပိုင်ရှင်သူဌေးနဲ့ ပြောခြင်ပါတယ်..”
““ ဟုတ်ကဲ့ သူဌေး မရှိပါဘူး..””
တစ်ဘက်မှ ချက်ချင်း ဖုန်းအမြန်ချသွားပါသည်။
လူမိုက်သည် လက်မှိုင်ချ၍ အကြံအိုက်စွာဖြင့် ညီမဖြစ်သူမရွှေဇင်ဌေး၏
၂၁-၅-၂၀၁ဝ နေ့၊ နံနက်(၁၀)နာရီခန့်အချိန်တွင် လူမိုက်သည်
မကွေးမြို့ပါတ်လမ်းပေါ်ရှိ (ရန်အောင်မြင် စေတီ) အနီးမှ
ကောင်းမွန်စူပါမားကတ်ဆိုင် တယ်လီဖုန်း(၂၃၆၀၀) ၊ (၂၃၆၀၁)
နှစ်လုံးသို့ဖုန်းဆက်ပြန်၏။ ဖုန်း (၂၃၆၀၁) မှ ဖုန်းက တဘက်လူကိုင်၍
“ဟေ့ ငါက (SB) ကပါ..အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့.. ကောင်းမွန်သူဌေးနဲ့
တစ်ဘက်မှ ကောင်းမွန်ပိုင်ရှင်၏ အထွေထွေမန်နေဂျာတစ်ဦးက
ဖုန်းလာကိုင်ပါသည်။ လူမိုက်က ပြောပါ၏။
“ အရမ်း အရေးကြီးကိစ္စရှိ့လို့၊ အေးအေးဆေးဆေး သူဌေးနဲ့ဆွေးနွေးရအောင်
“““ ဟုတ်ကဲ့ ဝ၉-၅၃၄၀၃၅၂ ကိုဆက်ပါ”””
လူမိုက် ယင်းဖုန်းအား ခေါ်ပါသည်။ အခြားတဘက်မှ ဖုန်းမကိုင်ပါ။
(၅)မိနစ်ခန့်အကြာတွင် လူမိုက်၏ ဟမ်းဖုန်းသို့ (၀၉-၅၁၀၇၈၆၈) နံပါတ်ဖြင့်
ဖုန်းပြန်ဝင်လာပါသည်။ ထိုအခါ လူမိုက်သည် ကောင်းမွန်စူပါမားကတ်ဖုန်း
တစ်ဘက်မှ လက်ခံသူအား သူဌေးအထင်ဖြင့် စကားကြီး စကားကြယ်များ ပြောဆိုတော့၏။
“ ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပါ..။ ကျွန်တော်တို့က
သိန်း(၅၀၀)လောက် အလှူခံချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ သိန်း(၃၀၀)ကို အခုပေးရမယ်။
ကျန်တဲ့သိန်း(၂၀၀)ကိုတော့ စိတ် ဆန္ဒရှိရင်
တစ်ဘက်မှ လူမိုက်စကားပြောပြီးအချိန်မှာ ဖုန်းခွက်ကို
အမြန်ချသွားပါတော့သည်။ ယင်းဖုန်း အား လူမိုက်ထပ်မံခေါ်ဆိုရာ
လုံးဝခေါ်ဆို၍မရတော့ပါ..။ နေ့လည်(၁၂)နာရီ အချိန် သို့ ရောက်သောအခါ
..လူမိုက် က ကောင်းမွန်ဟမ်းဖုန်း(၀၉-၅၁၀၇၈၆၈) သို့ထပ်မံပြန်ခေါ်၏။
အခြား တဘက်မှ ကောင်းမွန်စူပါမားကတ် ပိုင်ရှင်၏
အထွေထွေမန်နေဂျာပါဟု ဆိုသူက ဖုန်းလက်ခံစကား ပြော သည်။
““ အကိုတို့က ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဗျာ.. ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ။ ကျွန်တော်က
သူဌေးရဲ့ အထွေထွေ မန်နေဂျာပါ””။
လူမိုက်သည် မီးကုန် ယမ်းကုန်ဖြင့် အများပြည်သူလူထုကြီးကို ထိတ်လန့်
ခြောက်ချားစေသော စကားများကို လောဘအား ရှေ့တန်းတင်၍ ပြောကြားပေသည်။
“ ဟေ့ မင်းတို့ကို ငါတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်း ဒို့ကို
ငွေသိန်း(၅၀၀)လာပေးပါ။ ယခုပြောပြီး နောက် နာရီဝက် အတွင်း ငါတို့ကို
ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါ.. မဆက်သွယ်ဘူး၊မပေးဘူး၊ တစ်ခြားကိုသတင်းပေး တိုင်မယ်
တောမယ် ဆိုရင်တော့ ..ကောင်းမွန်စူပါမားကတ်ကြီးကို
လူမိုက်၏ ပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် တစ်ဘက်မှ ဖုန်းခွက်ချသံသည်
ကြယ်လောင် စွာမည်ဟည်းသွားပါ၏။ ချိန်းထားသော နာရီဝက်မပြည့်မီ
လူမိုက်ထံသို့ ကောင်းမွန်ဘက်က ဖုန်းပြန်ခေါ်လာသည်။ ယင်းအချိန်တွင်
လူမိုက်သည် လူရှုပ်သော ပြည်တော်သာလမ်းမ၏ ပြည်တော် သာတိုက်ခန်များဘေးသို့
ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ရောက်လာပါသည်။ ဝင်လာသော ဖုန်းအား နောက်မှ ပြန်ဆက်ရန်
လူမိုက်က အမိန့်ပေးလိုက်ရပြန်၏။ ဒီနေရာက ကောင်းမွန်စူပါမားကတ် နှင့်
နီးကပ်နေသောကြောင့် လူမိုက်စကားပြန် မပြောရဲပါ။ လူရှင်းသော မကွေးတက္ကသိုလ်
နောက်ကျော ဘက် ထန်းတောသို့ ရောက်အောင် လူမိုက်သည် ဆိုင်ကယ်အားအမြန်းစီးလာ
၏။ အချိန်မှာ နေ့လည်(၁)နာရီ ကျော်ခန့်ဖြစ်နေသည်။ သရက်ပင်ရိပ်အောက်တွင်
ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်လိုက်သည်။ လူမိုက်သည် စောစောက ကောင်းမွန်ဘက်မှ
ဟမ်းဖုန်းသို့ပြန်၍ ဆက်လိုက်သည်။ တစ်ဘက်ဖုန်းက သူဌေးရဲ့
““ ငွေက ဘယ်လောက်ပို့ပေးရမှာလဲ..””
“အေး လိုတာကတော့ ပြောထားတဲ့အတိုင်း သိန်း(၅၀၀)။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်
သိန်း(၃၀၀)ပို့ပေးရမယ်.။ ပို့ရမဲ့နေရာကိုတော့ ငါတို့မရွေးရသေးဘူး။ နီးမှ
တစ်ဘက်မှ သူဌေး၏ မန်နေဂျာက လေသံချိုချိုဖြင့် ဈေးဆစ်တောင်းပန်နေပြန်၏။
““ ကျွန်တော်တို့မှာ ရောင်းအားတွေကလည်း မကောင်းပါဘူး၊ နောက်
ချိန်းတဲ့နေရာကို ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းလည်း မလာရဲဘူး..။
နှစ်ယောက်လာခဲ့မယ်နော်.။ မြို့အပြင်ကို လည်း မလားရဲဘူး။ ငွေကိုဘယ်နေရာကို
“ အေး ဘယ်နေရာဆိုတာကို ငါတို့ အဖွဲ့နဲ့
လူမိုက်သည် တစ်ကိုယ်တော်ဖြစ်သော်လည်း သူ၏လုံခြုံရေးအတွက်
ဂိုဏ်းအဖွဲ့ပါလာ သ ယောင် အရောင်ဆောင်ပြောဆိုနေရပါသည်။ ရင်တွေတုန်၏။
ကြောက်စိတ် တွေဖြင့် ကြီးလန့် စာစား တောင်ကြည့်၊မြောက်ကြည့်ပြီး
တောင်တွင်းအထွက်လမ်း ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်း၏ အဝိုင်းပါတ်ထိပ်သို့
ရောက်လာ၏။ တစ်ဘက်မှ ကောင်းမွန်ဟန်းဖုန်း က လူမိုက်ထံဖုန်းဝင်လာသည်။
လူမိုက်သည် ဆိုင်ကယ်စီး ရင်း စကားပြောကြရ၏။ ဤ နေရာသည်
မကွေးအမှတ်(၂)ရဲစခန်း နှင့်နီး၍ ဆိုင်ကယ်ကို မရပ် ရဲပါ။
““ ကောင်းမွန်က မန်နေဂျာပါ.. သိန်းတစ်ရာပဲပေးနိုင်မယ်။””
“ ဟိုး မရဘူး သိန်းနှစ်ရာပေးမှတော့ ဖြစ်မယ်”
““ ကဲ ပေးမယ်..။ ပေးရမဲ့အချိန်ကိုတော့ နေ့ခင်းဘက်ပဲ ပေးချင်တယ်””
“ ငွေကိုလာပေးရမဲ့အချိန်က ဒီနေ့ည(ရး၃၀)နာရီတိတိမှာအရောက်လာခဲ့ရမယ်။
လာပေးရမဲ့ နေရာကိုတော့ အဖွဲ့နဲ့ တိုင်ပင်လိုက်အုံးမယ်”
လူမိုက်မှ အကြောင်းပြန်၍ ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်၏။ လူမိုက်
တည်းခိုသော ညီမ၏အိမ် ရန်မျိုးနိုင် (၉)လမ်း အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့ပါသည်။
အချိန်မှာ နေ့လည် (၃)နာရီ ထိုးနေပါပြီ။ ငွေရလို သော လောဘကြောင့်
ကောင်းမွန်က မန်နေဂျာ၏ ဟန်းဖုန်းအား လူမိုက်က ပြန်ခေါ်ဆို ပြန်သည်။
“ မင်းပြောထားတဲ့ ငွေကို ပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် ငါဆီကို ဖုန်းပြန်ဆက်ပါ”
လူမိုက်သည် ငွေရတော့မည် ဖြစ်၍ အလွန်ပျော်နေပေသည်။
၂၁-၅-၂၀၁ဝ နေ့၊ ည(ရး၁၅)နာရီအချိန်တွင် လူမိုက်ထံသို့ တစ်ဘက်ကောင်းမွန်
မန်နေဂျာ၏ ဟန်းဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ခေါ်ဆို၍ ဖုန်းဝင်လာပါသည်။ ဝမ်းသာစွာ
လူမိုက်ဟန်းဖုန်းကို ဖွင့်ပြီး နားထောင် နေပါ၏။ အဲဒီအချိန်တွင်
လူမိုက်သည် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မကွေးမြို့ပါတ်လမ်းမ ပေါ်ကို ရောက်နေပါသည်။
“““ ခဏနေရင် အကိုချိန်းတဲ့ နေရာကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လာခဲ့မယ်။
အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ.. ဘယ်ကို လာရမှာလဲ?။”””””
“ ဘယ်ကို လာရမယ် ဆိုတာ ငါညွှန်ကြားမယ်.. မင်းတို့ထွက်လာတာနဲ့ ငါ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပါ”
နှစ်ဘက်စလုံးမှ ဖုန်းများချသွားကြသည်။ အချိန်ကလည်း ည(ရး၃၀)နာရီကို
နည်းနည်းကျော် နေပါ သည်။ လူမိုက်သည်စိတ်မရှည်တော့၍ သူတို့ဆီသို့
ဖုန်းပြန်ခေါ်နေသည်။ တစ်ဘက်မှ ကောင်းမွန် မန်နေဂျာ မှ ပြန်ထူး၏။
“““ ဟုတ်ကဲ့ ခဏနေရင်လာပါတော့မယ်. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို
စောင့်နေရလို့ပါ။ (၁၀)မိနစ် လောက် ထပ်စောင့်ပေးပါ..““““
“ ဟေ့ မစောင့်နိုင်တော့ဘူးကွ.။ ပြောထားတဲ့အချိန်က ည(ရး၃၀)နာရီတောင် ကျော်နေပြီ”
““ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ပါ..ကျွန်တော်တို့ ထွက်လာတာနဲ့ ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ့မယ်””
လူမိုက်သည် ဟန်းဖုန်းလေးကို ကိုင်၍ကြည့်လိုက် ဆိုင်ကယ်ကို ဟိုနားခဏရပ်၊
ဒီနား ခဏရပ် ပြီး တစ်ဘက်မှ ဖုန်းအဝင်ကို မျှော်နေ၏။
(၁၀)မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါ..။ တဘက်မှ ဖုန်းခေါ်လာပါသည်။
““ကျွန်တော်တို့ထွက်လာပါပြီ.. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း ပါလာပါတယ်”””
“ အေး ဟုတ်ပြီး မင်းတို့ မြို့ပါတ်လမ်းကို ထွက်ခဲ့ပါ..
တောင်တွင်းကြီးအထွက် ပညာရေး ကောလိပ် ရှေ့ကို လာခဲ့ကြ..ဒါပဲ။ အဲဒီရောက်ရင်
(၅)မိနစ်ခန့်အကြာတွင် လူမိုက်ထံ သို့ ဖုန်းဝင်လာ၏။
““ ကျွန်တော်တို့ ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်း ရှေ့ကိုရောက်နေပါပြီ..””
“အေး ဟုတ်ပြီ မင်းတို့ မြို့ပါတ်လမ်းအတိုင်း မြောက်ဘက်ကို ပြန်လာခဲ့၊
အထက(၁)လမ်း ရောက်ရင် အနောက်ကို ချိူးဝင်လာပါ။ ပိုက်ဆံတွေကို
ဘာအိပ်နဲ့ထည့်လာ သလဲ။ မင်းတို့ ဆိုင်ကယ်က ဘာလဲ၊ ဘာအရောင်လဲ?။။“
““ ကျောပိုးအိပ် အနက်နဲ့ ထည့်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်အရာင်က
အနက်ရောင် (KENBO-110) ပါ ””။
လူမိုက်သည် မကွေးမြို့ (အထက-၁)လမ်းမပေါ်နှင့် ကန်သာရပ်ကွက်အရှေ့ဘက်မှာ
တည်ရှိ သော ကန်သာ ကန်ကြီး၏ အရှေ့ဘက် လမ်းကြားတောင်အရပ်
သို့ချိုူးဝင်လိုက်ပါသည်။ လမ်း မီးဓာတ်တိုင် အောက်တွင် လူမိုက်စီးလာသော
ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်ထားခဲ့၏။ သူ၏ဆိုက်ကယ် နံပါတ် အား ကြိုတင်၍ ညီမ၏အိမ်မှာ
ဖြုတ်သိမ်းထားခဲ့ပါသည်။သူသည် ကန်ဘောင်ပေါ်သို့ ပြေးတက်ခဲ့ပါသည်။
ကန်ဘောင်ပေါ်မှ ကန္တရပင်၏ အမှောင်ရိပ်သို့ဝင်၍ ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့် နေသည်။
လူမိုက် ဟန်းဖုန်းကိုဖွင့်ပြီး အမိန့်ဆက်ပေးပါသည်။
“ ဟေ့ မင်းတို့ကို ငါမြင်နေရတယ် မင်းတို့ဆိုင်ကယ်ကို ကန်သာကန်ကြီးရဲ့
အရှေ့ဘက်လမ်း ကြားထဲကို ချိုးဝင်လိုက်ပါ။ ငါ့ဆိုင်ကယ် ရင်ဇင်း
အနက်ရောင်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးရပ်ထားတယ်။ ဆိုင်ကယ် ဖင်ထိုင်ခုန်နောက်မှာ
ကြိုးပျော့တစ်ချောင်းကို ချီထားပြီး အစနှစ်ခုကို ချထားတယ်။ အဲဒီ
ဆိုင်ကယ်မှာ ငွေအိတ်ကိုချိတ်ထားပြီး မင်းတို့ချက်ချင်း
လူမိုက်သည် အမှောင်ထဲမှနေ၍ အာလုံးကိုမြင်နေရပါသည်။
သူအမိန့်ပေးသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နေသော ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဝင်လာသည်။
ကျောပိုးအိတ်အနက်ကို သူရပ်ထားသော ဆိုင်ကယ်ကို လာချိတ် ပေးပြီး
ဝင်လာသောဆိုင်ကယ်မှာ လာရာလမ်းအတိုင်း နောက်သို့ပြန် ထွက်သွား၏။သို့သော်
ကျောပိုးအိပ်လာချိတ်ပေးသော ဆိုင်ကယ်၏ နောက်မှ မလှမ်းမကန်းတွင်
ကားဖြုကလေးတစ်စီး ကပ်ပါလာတော့သည်။ လူမိုက်သည် အမှောင်ထဲမှ လျှပ်တစ်ပြက်
ခုန်ထွက်ပြီး သူ၏ဆိုင်ကယ်သို့ ပြေးလာခဲ့သည်။ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကို
ရောက်တာနှင့်ဆိုင်ကယ်ကို လျှင်မြန် ဖျက်လတ်စွာဖြင့် လမ်းကြို၊
လမ်းကြားများကို ချိုးကွေ့တိမ်းရှောင်သွားသည်။ နောက် မှ ပါလာသော
ကားအဖြူလေးမှာလည်း မီလု၊ မီလုဖြင့် တစ်နေရာအကွေ့တွင် မျက်ခြေပြတ်၍
ကျန်နေခဲ့ပါတော့သည်။ လူမိုက်သည် ပါလာသော ကျောပိုးအိတ်ကို ပြေးရင်းလွှာရင်း
အူယား ဖားယား လက်ဖြင့်စမ်းကြည့်၏။ အထဲတွင် ငွေထုပ်များမဟုတ်ပဲ၊
အုတ်ခဲကြီးနှစ်လုံးသာ ဖြစ်နေ၏။ လူမိုက်သည် “တောက်” တစ်ချက်ခေါက်ပြီး
ကျောပိုးအိပ်အနက်အား လွှင့်ပစ်ခဲ့ပါတော့ သည်။ ပြေးမိပြေးရာ လမ်းကြိုး
လမ်းကြားမှ ထွက်၍ သစ္စာလမ်းမပေါ်သို့ရောက်သောအခါ မြောက်ဘက်သို့ ဦးတည်၍
အိန္ဒြေရေ မပျက်ဆိုက်ကယ်ကို စီးလာခဲ့သည်။ သစ္စာလမ်းမြောက်ထိပ်ရောက်သော်
မိုနာလီဇာ(အမှတ်၄)ဆိုင် သို့ဝင်လိုက်၏။ ဤဆိုင်တွင် ဘီယာသောက်ပြီး
အမောဖြေနာခိုနေ ၏။ အချိန်မှာ (၁၁)နာရီထိုးတော့မည်ဖြစ်၍ လူမိုက်သည်
သူတည်းခိုနေထိုင် သော ညီမဖြစ်သူအိမ် ရန်မျိုးနိုင်ရပ်၊(၉)လမ်းအိမ်သို့
၂၂-၅-၂၀၁ဝ နေ့ နံနက်ပိုင်းတစ်ချိန်လုံးမှာ လူမိုက်သည်
အိမ်အပြင်သို့ လုံးဝမထွက်ရဲပါ။ အိမ် ရှင် ညီမ မိသားစုမသိစေရအောင်
ပုံမပျက်နေထိုင်နေပါသည်။ လူမိုက် သည် မျှော်လင့်ထား ခဲ့သော
ငွေရရှိရေးအတွက် မဟာစီမံကိန်းကြီးမှာ မအောင်မြင်ခဲ့၍
တော်တော်စိတ်ပျက်နေ၏။ ညက တစ်ညလုံး လုံးဝအိပ်၍ မပျော်ခဲ့ပါ။
စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့် အတူ အဖဖ်းခံရမည့် စိုးရိမ်သောကများက နေမထိ၊ ထိုင်မသာ
ဖြစ်နေပါသည်။ သို့သော်လူမိုက် မှတ်သားယုံကြည်ချက်တစ်ခုမှာ တစ်ခါသုံး
ဖုန်းကဒ် ဖြင့် ဆက်သွယ်အသုံးပြုပြောကြားချက် များမှာ ခြေရာခံ၍
လိုက်မရကြောင်းကို သူယုံကြည်စိတ်ချထား၏။ ထို့ကြောင့် လူမိုက်သည်
အားတင်းပြီး အိန္ဒြေရရ ပုံမပျက် မကွေးမှ ပြန်ထွက်မည်။ တစ်ယောက်ထည်းထွက်
ရင် ဂိတ်တွေက သံသယဖြစ်မည်။ ဒီတော့ သူ၏ညီမအား သူတို့ရဲ့ ဇာတိဖြစ်တဲ့
မြင်းစိုင်းရွာကို ဝင်မည်ပြောသည်။ ညီမကလည်း မရောက်တာကြာပြီးဖြစ်၍
လိုက်ချင်ကြောင်းပြော၏။ လူမိုက် ၏ အဖေါ်ခေါ်လိုသော ကိစ္စမှာ လွယ်လွယ်ဖြင့်
ထမြောက် သွားခဲ့သည်။ လူမိုက်သည် ညက ဖြုတ်သိမ်းထားသော သူ၏
ဆိုင်ကယ်နံပါတ်(မက/၉၆၆၈၂) အား ဆိုင်ကယ်တွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်လိုက်၏။
လူမိုက်၏ အစီစဉ်သည် သူ၏ ညီမကို မြင်းစိုင်းရွာကို ပို့ရင်း
ဖခင်ဦးမြင့်ဆွေ၊မိခင်ဒေါ်ဌေးကြည် တို့ကိုလည်း မတွေ့ရတာကြာနေ၍
တွေ့ချင်မြင်ချင် နေပါ သည်..။ဤ မိဘနှစ်ပါးသည်
ရိုးသားစွာဖြင့်တောင်သူလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လူမိုက်အား (BA=
သမိုင်းဘာသာ)ဖြင့် ဘွဲ့ရအောင် မကွေးမြိုှု့တွင်ကျောင်းထားခဲ့၏။
ကျေးဇူးရှင်မိဘများနဲ့ တွေ့ရန် စဉ်စားနေမိသည်။ လူမိုက်သည်
တောင်တွင်းကြီးမှ သူ၏ဇနီးနှင့် သားလေးထံ ပုံစံမပျက် အေးချမ်း
လုံခြုံစွာဖြင့် ပြန်နေမည်ဟု ကြိုတင်စီစဉ် စဉ်းစားထား ပါသည်။
၂၂-၅-၂၀၁ဝ နေ့ န့လည်(၁၂)နာရီအချိန်တွင် ညီမဖြစ်သူ မရွှေဇင်ဌေးနှင့်
အတူ သူ၏ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် တောင်တွင်းကြီးမြို့ အထွက်လမ်းအတိုင်း
ထွက်လာခဲ့ကြသည်။လမ်းတွင် အိန္ဒြေရေမပျက် ဂိတ်များကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့၏။
နေ့လည်(၁)နာရီခန့်အချိန်တွင် မြင်းစိုင်းရွာ သို့ ရောက်လာခဲ့ပါသည်။
ရွာတွင် သူ၏ညီမ မရွှေဇင်ဌေးကို ထားခဲ့၏။ ခေတ္တနားနေပြီးမိဘများနှင့် တွေ့၍
ရွာမှ တောင်တွင်းကြီးမြို့ သို့ ဆက်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ တောင်တွင်းကြီးသို့
ညနေ(၆)နာရီခန့် မှာ ရောက်လာခဲ့၏။
လူမိုက်သည် သူ၏ ဇနီးနှင့် သားဖြစ်သူတို့ နေထိုင်သော
ရွှေအိုး(၁)ရပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အိမ်သို့ အိန္ဒြေရေ မပျက်ဝင်လာနိုင်သည်။
ခေတ္တနား၍ ရေချိုးခန်းသို့ဝင်သည်။ လူမိုက်သည် ကောင်းမွန်ကို ဗုံးခွဲမည်ဟု
ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းရန် အသုံးပြုဆက်သွယ်ခဲ့ သော တစ်ခါသုံးကဒ်
ဖုန်းကဒ်အား ဟန်းစက်မှ ထုတ်လိုက်သည်။ ယင်း (09-44456035) ဖုန်းကဒ်အား
ရေချိုးခန်း၏ အုတ်ရေကန်ပေါ်တွင် ဝှက်ထားလိုက်ပါသည်။ ဒီတစ်ခါသုံး ဖုန်းကဒ်
တွေက နောက်ကြောင်းလိုက်လို့ မရဘူးဟု လူမိုက်က တစ်ထစ်ကျတွက်ထားပါသည်။
ဒါကြောင့်လည်း လူမိုက်သည် လွန်ခဲ့သော (၁၅-၅-၂၀၁၀) နေ့တွင်
တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ “ ပုလဲ” စတိုးဆိုင် မှဤ(09-44456035) ဖုန်းကဒ်ကို
နာမည် လိမ် မောင်အောင်မြင် မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ကို ကြုံရာ
ကျဘမ်းနံပါတ်များကို ပြော၍ ကြိုတင် ဝယ်ထားခဲ့ပါသည်။ လူမိုက်၏ အမည်မှန်
မောင်သိန်းကျော် နိုင်ငံသားနံပါတ် (၈/မကန(နိုင်) ၁၅၃၉၈၂)
ဖြင့်ဖုန်းကဒ်နံပါတ်(09-45523987) ဖုန်းကဒ်ကို တောင်တွင်းကြီးမြို့
မြို့ပတ်လမ်းနှင့် မကွေး လမ်းထောင့်ရှိ (“ 129”) စတိုဆိုင်မှ ဝယ်ယူ၍
ကောင်းမွန်စူပါမားကတ်ကို ခြိမ်းခြောက် ၍ငွေ တောင်း ခဲ့ သော
ဒီတစ်ခါသုံးကဒ်(09-44456035) အား လူမိုက် သိန်းကျော်မှာ အစဖျောက်ရန်
ကြံစီနေပါသည်။ ဤ လက်မတင် အချိန်အတွင်း တောင်တွင်းကြီးမြို့
မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုူး ဒု ရဲမှူးဦးသောင်းခင် ဦးဆောင်သော ရဲတပ်ဖွဲ့မှ
လူမိုက်သိန်းကျော်အား သက်သေခံပစ္စည်းများနှင့် အတူ လက်ရဖဖ်းဆီး
မကောင်းမူဟူသည် ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိ၊ ရာဇာဝတ်ဘေး ပြေး၍မလွတ်ပါ။
တစ်ဦး တစ်ယောက် တစ်မိသားစု ကောင်းစားရေးအတွက် အတ္တလောဘအား ရှေ့တန်းတင်သူ
တရားခံ လူမိုက် သိန်းကျော် အထင်နှင့် အမြင် ပါစင်အောင် လွဲမှားသွားပေသည်။
ယခုတော့ ငွေကျပ် သိန်း(၂၀၀) အစား၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)/၅၀၆ ။
မကွေးအမှတ်(၁)ရဲစခန်း (ပ)၂၅၇/ ၂၀၁ဝ ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမှ အရေးယူ၍
ပြစ်ဒါဏ်ကျခံ ရပါတော့မည်မှာ သေချာနေပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်း ရှင်းလင်းချက်။
ကောင်းမွန် စူပါမားကတ်ကြီးအား ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မည်
ဆိုသော လူမိုက်သိန်းကျော်၏ ကဒ်ဖုန်းဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ မိုက်ကြေးခွဲ
ငွေတောင်းဆို လိုက်ခြင်း ကြောင့် အများပြည်သူလူထု ကြီးမှာ မကွေးမြို့
တစ်မြို့လုံး ထိတ်လန့်၊ တုန်လှုပ်၊ ခြောက်ချား သွားကြရပါသည်။
ဤ အမူအား အချိန်အခါမီ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ပေးသူများမှာ ကောင်းမွန်
စူပါမားကတ် ပိုင်ရှင် သူဌေးနှင့် မန်နေဂျာအဖွဲ့တို့သည် သွေးအေးအေးထား၍
နူးညံ့သိမ်မွှေ့စွာ ဖြင့် မကွေးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်
မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ သတင်းပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ၏။
လူမိုက်တရားခံသိန်းကျော် မှ ကောင်းမွန် စူပါမားကတ်အား
စတင်ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းရန်ဖုန်းဆက်စဉ်အချိန်မှ စ၍ ဖုန်းအကြောင်း
ပြန်ကြား ပေးနေသော ကောင်းမွန် အထွေထွေမန်နေဂျာမှာ မကွေးခရိုင်ရဲမှူးရုံး
တွင် ရှိနေပါသည်။ချိန်းဆို၍ ငွေပေးသောနေရာတွင် တရားခံအားလွတ်သွားသည်မှာ
တမင် လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း တရားခံ၏ အပေါင်းပါများရှိခဲ့သော်
ဆက်လက်ဖဖ်းဆီးနိုင်ရန်နှင့် ဗုံးလက်နက်များအမှန်တစ်ကယ် ကိုင်ဆောင်သူ
ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဗုံးလက်နက်များကိုပါ ဖော်ထုန်နိုင် ရေးအတွက် တရားခံအား
ဟကြောင်းပေး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိခဲ့ရပါသည်။
ဤအမှုကြီးအား မကွေးတိုင်း ရဲမှူးကြီးနှင့် ဒုရဲမှူးကြီးတို့၏
လမ်းညွှန်ချက်အား ပီပြင်စွာ အမြန်ဆုံးတိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသူ
များမှာ မကွေးခရိုင် ရဲမှူး၊ ဒုတိယရဲမှူးကြီး သူရ သွင်ကိုကို နှင့်
မကွေးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ မြို့နယ်မှူး၊ ဒု ရဲမှူး ဦးကြူအင်းနှင့်
တောင်တွင်းကြီးရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်မှူး ဒုရဲမှူး ဦးသောင်းခင် တို့သည်
သတင်းရရှိသည့် အချိန်မှ စ၍ နေ့မနား၊ ညမနား အပူတပြင်း ကြိုးစား ဆောင်ရွက်
အများပြည်သူများ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားနေသာ
ဤအဖြစ်ဆိုးမှုခင်းကြီးအား တရားခံမိစေရန် အမြန်ခြေရာခံနိုင်အောင် တရားခံ
ကိုင်ဆောင် အသုံးပြု ထားသော တစ်ခါ သုံး ဖုန်းကဒ် နံပါများနှင့်
အပြန်အလှန်ပြောဆိုခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ်စာရင်း အားတိကျစွာ ကွန်ပျူတာ မှတ်
တမ်းဖြင့်ဖော်ထုထ်ပေးခဲ့သော မကွေးတိုင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ် ရေးလုပ်ငန်းရုံး၊
အထွေထွေမန်နေဂျာ မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သောကြောင့် တရားခံ ၏
အမည်မှန်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ အတိအကျသိခဲ့ရ၍ မကွေးမြို့နယ်ရဲမှူးမှ
ကွင်း ဆက်များကို အချိန်မီ ဆက် လက် ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ ကြောင်း
သတင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ဤ အမှုအား(၂၄)နာရီအတွင်းဖဖ်းဆီး နိုင်ခြင်းမှာ
မကွေးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ မြို့နယ်မှူး ဦးကြူအင်းမှ လျှင်မြန်စွာ
အကူအညီတောင်း၍ မကွေးတိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဌါနနှင့် မကွေးတိုင်း
၂၀၁ဝ ခု၊စက်တင်ဘာလထုတ် (၁၆) နှစ်မြောက် ဖြစ်ရပ်မှန်မဂ္ဂဇင်း မှ ကူးယူဖော်ပြပေးပါသည်။
win kyawaung has written 45 post in this Website..
View all posts by winkyawaung →
ယခုလို လာရောက်အားပေးတာကို အထူးခင်မင်လေးစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ..။
ဒီသတင်းကို ရေးတဲ့ သတင်းထောက်များအား ကောင်းမွန်သူဌေးက ဂုဏ်ပြုကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အမွှန်းတင်ခံရတဲ့ သူများကတော့ အသိအမှတ်ဂုဏ်ပြုဖို့ နေနေသာသာ လုံးဝပြန်မကြည့်ကြောင်း သတင်းထောက်တစ်ဦးက ရင်ဖွင့်ပြောကြားသွားပါတယ်..။ အင်း.. ရိုးတဲ့၊ အ တဲ့၊ ဖားတဲ့၊ ကောင်တွေ ခံလိုက်ပေါ့….
တရားခံက ယခင်က စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှာ တာဝန်ထမ်းပြီး ယခု ရခုင်ပြည်နယ်ဘက်က ခလရ စစ်တပ်မှ တပ်ပြေးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသတင်းများကို ပြည်တွင်စာနယ်ဇင်းများမှာ ဖော်ပြခွင့်မပြုကြောင်း သတင်းရေးသူများက ပြောကြားလို့ သိရပါတယ်။
(ဒီတစ်ခါသုံးကဒ်(09-44456035) အား လူမိုက် သိန်းကျော်မှာ အစဖျောက်ရန်ကြံစီနေပါသည်)
ကတ်ကလေးဘဲ မသကာ လမ်းဘေးမှာမြေတွင်းကလေး တူးသင်္ဂြ ိုလိုက်ဘာခက်တာမှတ်လို့အေးလေ အကုသိုလ်အကျိုးပေးနေမှာပ
ဒါနဲ ့နေပါဦး မောင်ရဲ့စစ်ကားထည်းကလို ဂြိုလ်တု ဆက်သွယ်ရေးနဲ ့လိုက်တာလည်းဟုတ်ဘဲနဲ ့
မှတ်ပုံတင်တောင်မမှန်တဲ့ကောင်ကို ဘယ်ကောင်ဆိုတာ ဘယ်သူက ဘယ်လိုုသိပြီး ဘယ်လိုဖမ်းသွားတာလဲဟ
ဟုတ်ကဲ့ တစ်ခါသုံးကဒ်က နှစ်ခုပါ။ နာမည်အမှန်နဲ့က တစ်ကဒ်၊ နာမည်တုနဲ့က တစ ်ကဒ်ပါ။ တရားခံက ဟန်းစက်ဝယ်စဉ် ကဒ်နှစ်ခုလုံးကို အပြန်အလှန် ဖုန်းခေါ်ထားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးမှတ်တမ်းက ခြေရာခံပေးတာပါ။ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ပျူတာက ထုတ်ပေးတဲ့ ဖုန်းခေါ်မှတ်တမ်းစာရွက် ဓါတ်ပုံကို တင်တာ ကွန်နရှင်ကျသွားလို့ ကျန်ခဲ့ရပါတယ်..။မြန်မာပြည်မှာ ဖုန်းတွေ အင်တာနက်တွေ အားလုံးကို သက်ဆိုင်က စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်ခင်ဗျား.။
ဟုတ်ကဲ့ တစ်ခါသုံးကဒ်က နှစ်ခုပါ။ နာမည်အမှန်နဲ့က တစ်ကဒ်၊ နာမည်တုနဲ့က တစ ်ကဒ်ပါ။ တရားခံက ဟန်းစက်ဝယ်စဉ် ကဒ်နှစ်ခုလုံးကို အပြန်အလှန် ဖုန်းခေါ်ထားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးမှတ်တမ်းက ခြေရာခံပေးတာပါ။ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ပျူတာက ထုတ်ပေးတဲ့ ဖုန်းခေါ်မှတ်တမ်းစာရွက် ဓါတ်ပုံကို တင်တာ ကွန်နရှင်ကျသွားလို့ ကျန်ခဲ့ရပါတယ်..။မြန်မာပြည်မှာ ဖုန်းတွေ အင်တာနက်တွေ အားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာက စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်ခင်ဗျား.။